Naya Post Nepal | महिलामा यसकारण हुन्छ बाँ”झोपन, यस्ता ल’क्षण देखिए रहनुहोस् सावधान
महिलामा यसकारण हुन्छ बाँ”झोपन, यस्ता ल’क्षण देखिए रहनुहोस् सावधान
काठमाडौँ । बाँझोपनलाई हाम्रो समाजमा नराम्रो दृ”ष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ। महिलाको बाँ”झोपनलाई त समाजबाटै ति’रस्कार गर्न खो’ जिन्छ। महिलाको बाँझोपनलाई समाजको अगाडि उभ्याउने र पुरु षको बाँ”झोपनलाई न’जरअ’न्दाज गरेको पनि भेटिन्छ।
बाँ”झोपन महिलामा मात्रै हुने स”मस्या हो भन्ने धा’रणासमेत वि’द्य मान छ। यसकै का’रण महिलाहरू घरेलु हिंसाको शि’कार बन्न पुग्छ न्। जबकि बाँ”झोपनको स”मस्या महिला र पुरुष दुवैमा ब’राबर मा त्रामा हुन्छ। बाँझोपनको स”मस्या र यसबाट मुक्त हुन श्रीमान तथा श्रीमती दुवै जनाको भूमिका उ’त्तिकै रहन्छ।
हिजोआज समाजमा बाँ”झोपनको स’मस्या दिन प्रतिदिन बढ्ने क्रम मा देखिन्छ। के हो बाँ”झोपन ? यो कसरी हुन्छ ? यसको स’माधान के हो ? यसबारे सामान्य जा’नकारी लिउँ।
विवाहपछि महिला र पुरुषले कुनै पनि परिवार नियोजनको अस्थायी साधन प्र’योग नगरी यौन सम्पर्क गर्दा, करिब १ वर्षसम्मको समयाव धिमा पनि बच्चा नभएको अव’स्थालाई बाँ’झोपन भन्निन्छ। लगभग ८५ प्रतिशत दम्पतिमा वि’वाहको पहिलो वर्षमै कोसिस गरेमा बच्चा हुने सफलता हुन्छ भने यसमध्ये ७ प्र’तिशत द’म्पतिमा विवाहको दो स्रो वर्षमा बच्चा हुने समभावाना हुन्छ। बाँकी १५ प्रतिशत लाई बाँ’ ‘झोपनमा राख्न सकिन्छ।
बाँ”झोपनका कारण : महिलाको म’हिनावारी गडबड हुनुः महिलाको म”हिनावारी करिब २१ देखि ३५ दिनसम्म हुनुपर्छ। कति जनामा ४५ दिनसम्ममा पनि म”हिनावारी नहुने हुन्छ। यसमा डिम्ब नि”ष्का शनमा गडबडी हुनु मु’ख्य का’रक हो, जस्तैः पोलिसिस्टिक ओभेरिय न सिन्ड्रोम।
डिम्बवाहिनी नली बन्द हुनुः जसमा क्ष’यरोग एउटा मुख्य का”रक हो । यस्तो इन्फेक्सनले शुक्रकिटको गतिविधिमा पनि पनि आ’उँछ र भ्रु’ण ब’स्न गा’ह्रो हुन्छ।
पाठेघरको संक्रमणः यौन स”म्पर्कबाट सर्ने रोग, क्ल्यामाइदिया, गो नोरहिया जस्ता सं”क्रमणले गर्दा पाठेघर, डि’म्बवाहिनी नलीका इन्फे कसन तथा इन्फ्लामेसन हुन्छ अनि डि’म्बवाहिनी नली बन्द हुन जा न्छ।
पाठेघरको ट्युमर्सः पोलिप र फा’इब्रोइद जस्ता ट्युमरले बच्चा ब’स्न दिँदैन अनि बाँ”झोपन हुन जान्छ।
महिलाको बढ्दो उमेरः ३५ वर्ष माथिका महिलामा डि’म्ब कम हुँदै जान्छ, जसका का’रण बाँ”झोपनको स”मस्या दे’खापर्न जान्छ।
जन्मजात पाठेघरको विकास नहुनु ग”र्भपतन : पहिलो शिशु नजन्माई गर्भपतन गराउनु अथवा बारम्बार ग”र्भपतन गराउनु, जसले गर्दा पाठेघर पातलो हुन जान्छ र पाठेघरको भित्ता एक-अर्कासँग टाँ’सिन जान्छ।
पुरुषको वी’र्यमा हुने शुक्रकिटको मात्रा कम हुनु (ओलिगो स्पर्मिया), शुक्रकिट स्वस्थ नहुनु वा शुक्रकिट नै नहुनु (एजोस्परमिया)। पुरुष को विर्यनलीमा सिस्ट, ट्युमर भएमा, पुरुषको गुप्ताङ्गको विकास रा’म्रोसँग नभएमा।
अन्य (जीवन शैली) : अ”त्याधिक मात्रामा धू’म्रपान तथा मदिरा से वन, जसको का’रण पुरुषमा शुक्रकिटको मात्रा कम हुने हुन्छ भने म’हिलामा पनि यसले गर्भ नरहनुमा उ’त्तिकै भूमिका खेल्छ। मोटो पन, खानपानको कमी, जंक फुडको बढी प्रयोग आदि। मानसिक त”नावले गर्दा पनि बाँ”झोपन हुन्छ कि’नभने म”स्तिष्क तथा पाठे घर एक–अर्काप्रति नि’र्भर हुन्छन्।
बाँ”झोपनमा गरिने जाँच : हिस्ट्री (श्रीमान् र श्रीमती): हि’स्ट्रीबाट पनि केही मात्रामा कसमा र के–कस्तो का’रणले गर्दा बाँ”झोपन भएकोे छ भनेर प’त्ता ल’गाउन सकिन्छ।
टिभिएसः यस प्रविधिबाट पाठेघरको ट्युमरहरू जस्तैः फाइब्रोइद र पोलिप, डिम्बासयका ट्युमरहरू प’त्ता लगाई बाँ”झोपनको का’रण थाहा पाउन सकिन्छ।
रगत परीक्षणः यसमा विशेषगरी ह’र्मोनको जाँच गरिन्छ, जस्तै स् टिएसएच, एफएसएच, एलएच, इटु, एस आदि, हिस्टेरोसाल्फिङ्गो ग्राफ्रीः डिम्बवाहिनीको सं’चारण। वि’र्य परीक्षणः यसमा पुरुषको वि’र्य जाँच गरिन्छ। विर्यको मात्रा र भो’ल्यूमः सामन्यता १.५–२ मिलि।
विर्यमा शु”क्रकिटको सं’ख्या र कन्सनट्रेसनः सामन्यता २० मिलि यन। शु”क्रकिटको चल्ने क्ष’मता र मोटिलिटीः सामन्यता ४० प्रति शतभन्दा माथि। शु’क्रकिटको आकार र मो’र्फोलोज।
उप’युक्त प’रामर्शरका’उन्सेल्लिङः निःसन्तान दम्पतिलाई डाक्टर स्वयंले प’रामर्श र का’उन्सेलिङ प्रदान गर्नुपर्छ। आवश्यक परेको अ”वस्थामा निःसन्तान दम्पतिको घर-परिवार स’हितलाई पनि का ‘उन्सेल्लिङ गर्नुपर्ने हुन्छ।
औषधि प”द्धतिद्वारा उपचार र मेडिकल थेरापीः महिलामा अन्डाको मात्रा बढाउन र ओ’भुलेसन गराउन गोनाडोत्रोफिन औ’षधि प्रयोग गरिन्छ जसले केही मात्रामा बाँ”झोपन कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। त्यसैगरी पुरुषको नि’म्ति केही प्रकारका औषधि उप’लब्ध छन् जस्ले शुक्रकिटको मात्रा बढाउन म”द्दत गर्दछ (ऐन्टी अक्सिडेन्ट, भिटामिन)।
आइयुआईरआइभिएफ प्रविधिः आइयुआई भन्नाले पुरुषको वि’र्य लाई चा’लेर महिलाको पाठेघरमा सिधै राख्ने प्र”क्रिया हो। यो करिब २० प्रतिसतमा स’फल हुन्छ र ४–६ पटकसम्म गर्न सकिन्छ। आ’इ भिएफ प्रविधिमा म’हिलाको डिम्बासयबाट डि”म्बलाई अलग गरी शरीर बाहिर ल्याबमा पुरुषको शु”क्रकिटसँग नि”षेचित (फर्टिला इज) गरिन्छ।
त्यसपछि तयार भएकोे भ्रु”णलाई महिलाको पाठेघरमा प्र”त्यारोपित गरिन्छ। यस प्रविधिको मद्दतबाट नि’षेचनको प्रक्रिया त्यो महिलामा पनि गर्न मिल्छ, जसको श्रीमानमा शु”क्रिकटको मात्रा धेरै कम भए कोे पाइन्छ। यो सा”धारणतया ४०–५० प्रतिशत व्यक्तिमा स’फल हु न्छ।
शल्यक्रिया, ल्याप्रोस्कोपिकः यदि बाँझोपनको कारक पाठेघर, डिम्बा सयको ट्युमर भएमा त्यसलाई ल्याप्रोस्कोपिक प्र’विधिद्वा’रा नि’का ल्न मिल्छ।
हिस्टेरोस्कोपिकः यस प्र”विधिबाट पाठेघरभित्र रहेका साना ट्’युमर हि’स्टेरोस्को’पको मा”ध्यमबाट (पाठेघरभित्र भिडियो पठाई शल्यक्रि या) बिना पेट खोली योनाङ्गको बाटोबाट नि”कालिन्छ। [अमरउजा ला (हिन्दी संस्करण) बाट नयाँ पु’स्ता डटकमले गरेको नेपाली अनु वाद]
२०७८ माघ २०, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 179 Views